Buraannews.com » Faroole oo Ceeb kala Kulmay Madaxweynaha Cusub”Beesha Mareexaana Faraxsan
Faroole oo Ceeb kala Kulmay Madaxweynaha Cusub”Beesha Mareexaana Faraxsan
September 20, 2012 - Written by reporter2 - Edited byreporter2 Ayadoo so baxayaan warara hoose shegaya in Madaxweynaha Cusub oo doonaayo in Xilka Ra’isulwasaaraha usoo magacaabo Shaqsi aan hore loo arag siyaasada soomaaliya kaso aamisan in wax badan oo kala qaban doono arinta soomaaliya ayaa warar dheraad kaso baxayaan.
Madaxweyne Xasan ayaa lasheegay in Ra’isulwasaare uso magacaabi dono muwaadin soomaaliyeed oo mudo kunoolaa wadanka Mareekanka kasoo lasheegay in oo kasoo jeedo meesha Mareexaan ayadoo madaxweynaha u sababeynaayo in shaqsigaan u gartay nin wax badan kaqaban karo xaalada wadanka soomaaliya.
Maamulka Puntland oo sanadihii ugu danbeyse awood xoogan kulahaa Dowladihii KMG ayaa lasheegay in kulan xasaasi kayeesheyn arinkaasi ayado lasheegay in mowqif cad ay kaqateen Dowlada Cusub iyo Madaxweynahaba.
Faroole aya lasheegay in qadka taleefonka kula soo xariiray Gaas iyo madaxweynaha Cusub asagoo kala tashtay xaalada wadanka iyo soo magacaabista waxaana lasheegay in madaxweynaha Cusub sheegay in oo uso magacaabi doono shaqsigaasi kuna adkeystay.
Faroole ayaa kawar dhoraayo magacaabistaasi waxaan wararka hoose shegayaan in oo cadeeyo mowqifka oo kaqabo hadii ladoorto Ra’isulwasaare aan isku heyb ahayn wallow Faroole aan ku ahaa ku hadaaqista hadalo kulul xiliyada oo danihiisa iyo kuwa beeshiisa kawaayo Xalada wadanka Soomaaliya.